अमेरिकामा कति रहेछन् त नेपाली ? | himalayakhabar.com
16746 पटक पढिएको
हिमालयखबर संवाददाता | 5th Feb 2017, Sunday | २०७३ माघ २३, आईतवार ०७:४२
ड्यालस (टेक्सस), अमेरिका– अमेरिकामा नेपालीको संख्या ठ्याक्कै यतिनै हो भन्नु असंभव छ। कतिपयले नेपालीको संख्या एकिन गर्नुलाई नेत्रबिहीनले हात्ति छाम्नुसँग समेत तुलना गर्छन। कसैले तीनलाख त कसैले चारलाख नेपाली छन् भनेर भन्दै आएका छन्। बढाई चढाई गर्नुपर्दा पाँचलाखको हाराहारीमा नेपालीहरु अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा छरिएर रहेका छन् भन्नेहरु पनि छन्।
तर, अब अमेरिकामा नेपालीको संख्या ठ्याक्कै एकिन नभएपनि हाराहारीको निकट भने आएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको संख्या पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार एनआरएनको पाँचौ साधारण सभामा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकामा दुईलाख ५१ हजार नेपालीहरु छन्।
परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरे। महतले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा पहिलोपटक उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित संख्या उल्लेख गर्दै संसारका धेरै साना देशको जनसंख्याभन्दा अमेरिकामा नेपालीको संख्या बढी रहेको चर्चा गरेका थिए।
‘यो तथ्यांक ठ्याक्कै एकिन होइन, हामीले निकाल्दा दुई लाख ३१ हजार नेपाली रहेको भेटियो। त्यसमा २० हजार हाम्रो तथ्यांकमा तलमाथि रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्दा झण्डै दुईलाख ५१ हजार रहेको अनुमान हामीले गरेका छौं,’ नेपालीहरुको संख्या छानबीन कार्यदलका सदस्य विजयराज भट्टराईले भने।
अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुमध्य ५२ प्रतिशत अर्थात एकलाख २० हजार गैरआप्रवासी भिसामा रहेका छन्। विद्यार्थी, बिभिन्न रोजगारीमा संलग्नहरु यो वर्गीकरणमा पर्छन्। त्यस्तै ४८ प्रतिशत अर्थात एकलाख १० हजारसँग स्थायी बसोबास पत्र (ग्रीनकार्ड) या नागरिकता छ। नेपाली बाबु आमाबाट अमेरिकामा जन्मेका बालबालिकाको संख्या १९ हजार रहेको भट्टराईले बताए।
अहिलेसम्म काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट गैर आवासीय भिसा पाएका नेपालीको संख्या दुईलाख २० हजार रहेको छ। ‘यी मध्य सबैजना अमेरिकामा आए बसेकै भएपनि चर्चामा रहेजस्तो ४/५ लाख नेपाली अमेरिकामा हुँदैनन्,’ भट्टराईले भने।
अहिलेसम्म आप्रवासी भिसा पाउने नेपालीको संख्या एकलाख चारहजार रहेको छ। त्यसबाहेक विद्यार्थी, पर्यटकका रुपमा आएर स्टाटस परिवर्तन गर्न आवेदन दिएर ग्रीनकार्ड लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अमेरिकी जनगणना, अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी, युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट र नेपालको जनसंख्यालाई समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन निकालिएको हो। प्रतिवेदनले सन् २००० देखि २०१० सम्मको दशकमा अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि ‘एसाइलम’ प्रमुख मार्ग भएको देखाएको छ।
बार्षिक १५ हजार पाँचसयका दरले नेपालीको संख्या अमेरिकामा थपिँदै गएको अनुमान छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउन नसकेको मेक्सिकोबाट सीमा पार गरेर आउने नेपालीहरु हजारौंको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी पूर्बीतटः
नेपालीको संख्या अमेरिकाका ५० राज्यमध्य सबैभन्दा धेरै पूर्बी तटीय राज्यहरुमा देखिएको छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुमध्य न्यूयोर्क, मासाचुसेट, कनेक्टिकट, भर्जिनिया, डिसी लगायतका राज्यहरुमा २५ प्रतिशतको बसोबास छ। त्यसपछि सबैभन्दा धेरै टेक्सस, ओक्लाहोमा, लुजियाना लगायत राज्यहरुमा १५ प्रतिशत नेपालीहरु बस्छन्।
इण्डियाना, केन्टकी लगायत राज्यहरुमा १४ प्रतिशत नेपालीहरु बस्छन्। फ्लोरिडा, नर्थ क्यारोलाइना, साउथ क्यारोलाइना लगायत राज्यहरुमा १३ प्रतिशत नेपाली बस्छन्।
पश्चिम तटीय राज्य क्यालिफोर्निया र नेभेडामा १२ प्रतिशत नेपालीहरु बसोबास गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
‘यो हाम्रो प्रारम्भिक प्रतिवेदन हो, अब हामी कुन राज्यमा कति नेपाली छन् र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर वृस्तृतमा अध्ययन गर्नेछौं,’ कार्यदलका संयोजक डिल्ली भट्टराईले भने। त्यसपछि नेपालीको एकिन संख्या पत्ता लाग्नेछ।
नेपालीहरुको संख्याको विषयमा संस्था र व्यक्तिपिच्छे हुँदै आएको अनुमान एनआरएनको यो अध्ययनले समाधान गर्ने भएको छ। डिसीस्थित नेपाली राजदूतावास समेतको सकृयतामा यो अध्ययन गरिएको थियो।
नेपालीको जनसंख्या कार्यदलमा एनआरएन अमेरिकाका उपाध्यक्ष डिल्ली भट्टराई संयोजक थिए। त्यस्तै सदस्यहरुमा विजयराज भट्टराई, सूर्य लम्साल, आमोद पोखरेल, दीपकराज काफ्ले, डोलेश्वर भण्डारी, किरण सिटौला, सन्जिता प्रधान, शिव गौतम र नेपाली दूतावासका तर्फबाट कैलाश पोखरेल सदस्य थिए।
‘नेपालीको संख्या संबन्धि कुरो सधैँभरि अनुत्तरित थियो, यसलाई एकहदसम्म भने निकटतासँग ल्याएर समाधान गरेका छौं,’ कार्यदलका सदस्य भट्टराईले भने।
विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक खत्री पक्राउ
२०७३ माघ २३, आईतवार ०३:०८
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुन भन्सार छलेर भित्र्याइएकोे घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्याम खत्री पक्राउ परेका ...
अमेरिकामा ट्याक्स फाइल के गर्ने, कसरी गर्ने ?
२०७३ माघ २३, आईतवार ०७:४३